स्वाभिमानी नेपालीको एकता अक्षुण्ण राखौँ ! - Online Majdoor
११ जेष्ठ २०७७, आईतवार १२:५५
मातृभूमिमाथि कसैले आँखा लगाएको कोही नेपाली हेरिराख्‍न सक्दैन । तर, भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि मिचिएको छ । सुस्ता र कालापानीमा भारतले सबभन्दा बढी अतिक्रमण गरेको छ । महाकाली नदीमा बनेका शारदा र टनकपुर बाँधबाट भारततिर लगिएको पानी र नेपालको डुबानक्षेत्र देख्दा जोकोही नेपालीको रगत उम्लिन्छ । अझ, शारदा ब्यारेजवारि नेपाली भूमिमा बसेको भारतीय सीमा सुरक्षा बलको क्याम्प देख्दा कोही पनि देशभक्त नेपाली उद्वेलित हुन्छ । कोसी र नारायणी नदीको पानी पनि नेपाली भूमिबाट त्यसैगरी भारत फर्काएर लगिएको छ, नेपाली भूमि बाँझै, भारतको भूमि सिञ्चित । असमान सन्धि गर्ने नेपाली शासकहरूप्रति पनि स्वाभिमानी नेपाली जनतजनमा स्वाभाविक आक्रोश उत्पन्न हुन्छ । इतिहासका गल्ती, कमजोरी, बदमासी वा देशघाती कदमको सजाय आजको पुस्ता भोग्दै छ । तर, समय बदलिएको छ, नेपालीको चेतनाको स्तर हिजोजस्तो छैन ।
दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको घाउले नेपालीलाई चहर्‍याएको आज होइन । यसपालि एउटा राम्रो काम भएको छ, जनताको दबाबपछि नेपाल सरकारले ती क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । तर, झन्डै सात दशकदेखि त्यस क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सुरक्षा फौज नहटाएसम्म नेपालीले शान्तिसँग बस्न पाउने छैनन् । किनभने भारतले मिचेको प्रत्येक इन्च भूमिमा नेपालीको स्वाभिमान रोपिएको छ । कुनै पनि देशको नागरिकको निम्ति सार्वभौमिकताभन्दा ठुलो अरू केही हुनेछैन ।
लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदी नै नेपाल–भारतको सिमाना हो । नदीको जलप्रवाहको हिसाबमा काली नदीको उद्‍गम लिम्पियाधुरा नै हो । लिम्पियाधुराबाट कुटी हुँदै बग्ने सोही नदीलाई स्थानीय भाषामा कुटियाङ्दी पनि भनिन्छ । इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नै निर्धारण गरेको अन्तरदेशीय सीमा काली नदी नै हो र यो सन्धि नै नेपालको अडानको सबभन्दा मुख्य आधार पनि हो । भारतले लिपुलेकबाट आएको खोलालाई कालीनदी दाबी गर्नुको अर्थ सुगौली सन्धिलाई अस्वीकार गर्नु हो । सुगौली सन्धिले नै नेपालको भूमि मेची–कालीमा खुम्च्याएको हो । त्यसअगाडि नेपाल त पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिम किल्लाकाँगडा फैलिएको थियो । त्यसो हो भने अब नेपालले त्यही विशाल नेपालको दाबी किन नगर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय पक्षबाट आएको प्रतिक्रिया र भारतीय सञ्चारमाध्यममा देखिएको अराजक शैली तथ्यसँग मेल खाँदैन । कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ताको विषय कसैले बोल्दा सम्बन्धित देशको आत्मसम्मानको ख्याल गरे-नगरेको बारे पनि गम्भीर हुनुपर्छ, तर भारतीय सञ्चारमाध्यम तथ्य र प्रमाण नराखी पूर्वाग्रही तरिकाले प्रस्तुत भएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालले चीनको इसारामा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको भनी नेपालीको स्वाभिमानमाथि प्रहार गरिरहेका छन् । सडक बनाउँदै गर्दा नबोल्ने नेपालले सडक उद्घाटन गर्ने बेलामात्र बोलेको भन्ने बचकना तर्क तिनीहरू गरिरहेका छन् । सीमाको विषय उठाउन समयको सीमा हुँदैन । कुनै सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दैमा सीमा मिच्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । त्यतिमात्रै होइन, नेपाली जनताले दशकौंदेखि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने माग गर्दै आएका छन् । गत कार्तिकमा भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरेकै हो । वार्तामा चासो नदेखाएको भारतले उल्टो नेपाल वार्तामा आएन भनी फतुर लगाइरहेको छ । नेपाली जनता सचेत र एकताबद्ध हुनैपर्छ ।